Advertising in Myanmar 2017
☎ 09 979 300 900 ★ http://advertisingmyanmar.com
တစ်ရက် ကျပ် ၃၀၀၀ လောက်နဲ့ ကြော်ငြာ ထည့်ကြည့်ပါ။
GMail + Google Advertising in Myanmar
Advertising Myanmar .com Ad Store
Our 1-stop advertisement online store is an ad agency where you can buy and order ad-space for all advertising media in Myanmar. We accept PayPal, Visa, and Mastercard payments. You can conveniently pay us to order and advertise your product, services, or events, in Myanmar newspapers, journals, and magazines. Although we are not completelyafull-service advertising agency yet, we can operate your advertising campaigns depending on product. Feel free to sendabrief email or give usacall for consultation on your project.
Publishers? or Media?
ပုံနှိပ်သူ၊ ထုတ်ဝေသူ၊ ဝဗ်ဆိုက် ပိုင်ရှင်၊ အသံလွှင့်သူများအား ကျွန်တော်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် မေတ္တာရပ်ခံ လိုပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ ကြော်ငြာ နေရာ (advertising space) များကို ကျွန်တော်တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်ယူ ရောင်းချလိုပါသည်။ သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို ပို့လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ဆက်သွယ်ပါ့မယ်။
For advertising in Myanmar, which digital marketing method is right for your product?
Our advertising experts are here to assist you for sorts of promotion of your products and services.
This type of advertising is most popular in Myanmar so far, for local targetting. Top marketers do spendalarger portion of advertisement spending into this category. The rates ranges fromahundred dollarsamonth to overahundred thousand dollars per month, depending on the location of your billboard ad. Most expensive is in Yangon.
Many ad agencies have invested in building bus-shelters in agreement with the local municipal authorities, in exchange for the right of advertising behind bus-stops in Yangon. If you are interested in promoting in downtown Yangon, this could beagood choice for you.
Taxi/bus Sticker Advertisement:
While public transportation isamajor solution to the Yangon population, sticker ads on big buses are quite effective when it goes all around town. It works likeamobile billboard ad, and some of our clients believe it is even more effective than billboards.
If you are targetting the younger generation and the consumers of the more modern life-style, this is the right advertising strategy for you. Web publicizing, likewise called Internet promoting, uses the Internet to convey limited time showcasing messages to purchasers. It incorporates email promoting, web crawler advertising, social networking showcasing, numerous sorts of presentation publicizing (counting web flag publicizing), and versatile publicizing. Like other promoting media, web publicizing regularly includes bothadistributer, who incorporates commercials into its online substance, andasponsor, who gives the ads to be shown on the distributer's substance. Other potential members incorporate promoting organizations who help produce and spot the commercial duplicate,anotice server who mechanically conveys the advertisement and tracks detail, and publicizing subsidiaries who do free limited time work for the publicist.
When we mention 'print advertising', we refer to advertisements in local or national newspapers, weekly journals, magazines, and so on.
Air time on radio isagood bargain, and quite effective for immediate responses, like near-deadline activities or events. Radio ads covers well to rural homes and urban car-driving audience.
Inacountry where telephones used to beasymbol of the rich¬, SMS advertising could be most effective to reach the bread-winners of the family. However, language medium of the SMS you send could beabarrier depending on the langauge you choose to send messages. There simply is 160-character limit to short messages.
While the number of television viewers grew significantly, the number of television channels grew too. Advertisers and marketers should note well that the growing number of TV channels cut down the effectiveness of TV commercials exponentially. Instead we encourage SMS or internet advertising.
FYI, businesses who use Google AdWords mostly are travel agencies, international and local tour operators, hotels (in Yangon, Mandalay, Bagan, Inle), restaurants, jewelry shops, law firms, lawyers, exporters, importers, etc. Businesses who use Facebook sponsored article ads mostly are tour operators, fashion shops, restaurants, car dealers, etc.
စီးပွားရေး လုပ်တိုင်း ကြော်ငြာတယ်ဆိုတာ မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ့် ကိစ္စတစ်ခုပါ။ သင့်လုပ်ငန်း၊ သင့်ထုတ်ကုန် တွေကို လူသိအောင် ထိရောက်အောင်၊ အလေအလွင့် နည်းအောင်၊ ကြော်ငြာချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Advertising Myanmar .com မှ ကြော်ငြာ ကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
ဘယ်ရောင်းကုန် အတွက် ဘယ် digital marketing ကြော်ငြာနည်းက အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်မလဲ?
သင့်လုပ်ငန်းက ကြော်ငြာ ဘတ်ဂျက်ကို မဖြုန်းမိ ပါစေနဲ့။ ပြည်တွင်းလား။ ပြည်ပလား။ မြို့ကိုလား။ နယ်ကိုလား။ အမျိုးသားကို ရောင်းမှာလား။ အမျိုးသမီးကို ရောင်းမှာလား။ လူကြီးပိုင်းကို ရောင်းမှာလား။ လူငယ် လူလတ်ပိုင်းကို ရောင်းမှာလား။ သေသေချာချာ စဉ်းစားပါ။ အခမဲ့ လာရောက် တိုင်ပင် ဆွေးနွေး နိုင်ပါတယ်။ ကူညီပေးဘို့ အသင့် ရှိပါတယ်။
မြို့ကြီးတွေသာမက နေရာ ဒေသစုံက billboard ပေါင်း (၁၀၀) ကျော်မှာ သင့်ကုန်ပစ္စည်းအတွက် သင့်တော်သော billboard ကို တစ်စုတစ်စီးတည်း ရှာဖွေဌာရမ်းနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Bus Stop Advertisement:
ရန်ကုန်မြို့တွင်း၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော် မှာရှိတဲ့ ဘတ်စ်ကားဂိတ်တွေမှာ စရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ သင့်ထုတ်ကုန်တွေကို ကြော်ငြာနိုင်အောင် location နဲ့တကွဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ အဌားယာဉ်တွေ၊ Bus Car တွေမှာ ကြော်ငြာနိုင်ရန် ယာဉ်အမျိုးအစာနဲ့ အခြားအချက်အလက်များကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ Internet အသုံးပြုနှုန်းဟာ ၁သန်းကျော်သို့ရောက်ရှိလာပြီး အများစုမှာ educated level များဖြစ်ပါတယ် ၊ဒါကြောင့် လူကြည့်အများဆုံး အင်တာနက် ဝက်ဆိုဒ်တွေမှာ ကြော်ငြာနိုင်ရန် စုစည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရှိ စားသုံးသူရဲ့၄၁% ဟာ နေ့စဉ်သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများကို ဖတ်ရှုကြပါတယ်။ ဒီလို printed media, လမ်းညွှန်စာအုပ် တွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှထုတ်ဝေတဲ့ printed media တွေမှာ ရွေးချယ်ကြော်ငြာနိုင်အောင် စုစည်းပေးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း radio fm/am နားဆင်သူ ၄၀% ရှိနေပါတယ်။ ဒီလို စားသုံးသူတွေဆီကို ရောက်ရှိနိုင်ရန် အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန် သက်သာစွာ နဲ့ ကြော်ငြာနိုင်စေရန် စုစည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
mobile phone အသုံးပြုသူဦးရေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၅၄၀,၀၀၀ ကျော် ရှိနေပါတယ်၊ နှစ်စဉ်တိုးလာတဲ့ mobile phone သုံးသူတွေဆီကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ကြော်ငြာရောက်ရှိနိုင်ဖို့ အထိရောက်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်ရှိ ၄၈% သော TV ကြည့်ရှုသူတွေဟာသင့်ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို သုံးစွဲရန် မျှော်လင့်နေသူတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် TVCs ad ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုနိုင်အောင် လူကြည့်အများဆုံး TV channel ကြော်ငြာဈေးနှုန်းများကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။